Sarintany mahaliana sy torapasika any Sri Lanka " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Sarintany naharitra » Sarintany Sri Lanka
Sarintany Sri Lanka
Sarintany fisarihana sy tora-pasika
Sarintany mahasarika an'i Sri Lanka sy ny torapasika
Ny saritany hitanao etsy ambany↓, mifanerasera tanteraka. Azonao atao ny mikaroka teny lakile toa ny "morontsiraka" na "antsitrika", "riandrano" sy ny hafa. Ho valin'izay, ny sari-tany dia hanisy marika ho an'ireo sokajy mahaliana. Na mitady amin'ny anarany fotsiny.
Weather map in Sri Lanka
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany dia afaka mahita ny toetr'andro any Thailand ianao.
Ny mari-pana amin'ny volana maro
(Antsipiriany momba ny toetr'andro sy toetr'andro any Sri Lanka, jereo eto)
Sri Lanka dia misy toetrandro mafana sy maina. Ny antoandro dia ny + maripotra antonony dia +31, amin'ny alina +23. Tsy dia misy firy ny orana amin'ity volana ity ary ny orana mivatravatra miaraka amin'ny varatra dia mety mandalo imbetsaka mandritra ny volana Janoary. Ny hafanan'ny ranomasina dia +28. Manomboka ny filentehan'ny masoandro amin'ny 18 hariva. Ny ankamaroan'ny andro dia misy rahona sy masoandro. Ity no volana tena mety indrindra amin'ny fialan-tsasatra amin'ity firenena ity.
Ny volana febroary no volana indrindra ao Sri Lanka. Matetika dia tsy misy orana firy amin'ny volana febroary. Ny hafanana amin'ny andro dia eo amin'ny +32, amin'ny alina +23, ny mari-pana eo akaikin'ny morontsiraka dia +28. Tena soa ihany koa ny fitsangatsanganana any Sri Lanka.
Ny martsa amin'ity nosy ity dia asehon'ny toetrandro somary mitana ny rahona, na izany aza, dia avy ny orana matetika kokoa amin'ny volana febroary. Amin'ny andro, ny hafanana matetika mihoatra ny +33. Mandritra izany fotoana izany dia manjaka ny hamandoana avo lenta, izay no mahatonga azy ho feno rivotra sy tsy mahazo aina.
Aprily ny volana fiandohan'ny fotoanan'ny orana, raha misy orana mivatravatra miaraka amin'ny varatra, indrindra amin'ny alina. Miakatra ho an'ny +30 ny mari-dranon'ny ranomasina. Tsy volana tena tsara anefa izany raha ny dia mandeha any Sri Lanka.
Mey ny tampon-tànan'ireo monoyons, raha mahatratra ny 99% ny hamandoana, avy ny orana sy kotroka saika isan'andro, amin'ny andro dia mafana ny andro ary misy rivo-doza. Izy ity ihany koa no iray volana tsy mampalahelo amin'ny fialantsasatra amin'ity firenena ity.
Niala tamin'ity volana ity ny monsoon, ny ranomasina any amin'ny faran'ny orana nijanona ho +28, tsy hita intsony ny orana tahaka ny tamin'ny Mey, fa mbola mitohy ny fanenjehana. Ity dia volana ratsy ihany koa raha mandehandeha any Sri Lanka.
Amin'ny orana, dia avy be ny orana matetika, ny mari-pana eo amin'ny morontsiraka amin'ny ankapobeny dia +28, ary amin'ny andro atoandro ny mari-pana dia tsy mihoatra ny +31. Matetika milentika amin'ny andro ny toetrandro. Ity dia volana tsara ho an'ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina any Sri Lanka.
Ny volana Aogositra no toetrandro farany sy mangatsiaka indrindra eto amin'ny nosy. Ny mari-pana amin'ny andro dia manomboka amin'ny + 25 ... + 30. Ho an'ny mpizahatany avy any amin'ireo firenena manana haingam-pandeha mafana, dia izao no fotoana tsara indrindra. Ny volana Aogositra dia mety indrindra amin'ny fialantsasatra amoron-tsiraka, milamina ny ranomasina amin'izao fotoana izao.
Ny volana septambra dia tsy dia fahita firy ny andro misy masoandro any amin'ny nosy. Manakaiky ny vanim-potoana monsoon. Amin'ny maraina sy hariva dia tena mahafinaritra. Ho antoandro, ny mari-pana ao amin'ny antsasaky ny hafanana dia +30, ny ranomasina ranomasina +28, amin'ny faran'ny volana septambra no mihena ny isan'ny orana.
Ny volana Oktobra no tampon'ny tampon'ny monsoon. Avy ny orana isan'andro amin'ity volana ity. Tsy misy fiposahan'ny andro. Ny mari-pana eo anelanelan'ny andro dia manomboka amin'ny + 28 ... + 30, alina - manomboka amin'ny +25 ka hatramin'ny +27. Ny haavon'ny hamandoana dia avo indrindra amin'ity volana ity, ary mihamando sy tsy mahatsiaro tena any Sri Lanka. Ity volana ity dia tsy tsara ho an'ny dia.
Tamin'ity volana ity, nifofofofo ny rivotra, nipoaka ny ranomasina, misy rivo-doza vokatry ny fandaozan'ny monsoons. Matetika io orana io, nefa kely kokoa raha oharina amin'ny Oktobra Matetika matetika dia misy masoandro, amin'ny andro dia tsy miova ny hafanana ary average +30.
Volana iray tena mahomby amin'ny fialan-tsasatra any Sri Lanka. Amin'ny antoandro, mazava ny lanitra, zara raha avy ny orana, ny mari-pana dia +28, mihena ny mari-pana amin'ny habe + 28 ... + 32. Ny ampahany maivana amin'ny andro dia maharitra mihoatra ny 11,5 ora, misy 8 ora amin'ny hazavan'ny masoandro amin'ny andro mahazatra. Iray amin'ireo volana mahomby indrindra mitsidika an'i Sri Lanka.
Tsy sarintany ratsy an'i Sri Lanka. Manamarika zato (ary mameno). Ity dia saika feno amin'ny sarin-tany mahaliana sy tora-pasika ao amin'ity paradisa nosy kamo ity!
Tena mety izany. (miasa ihany raha any Sri Lanka ianao)
mandehandeha eny amin'ny sari-tany (fiakarana an-tendrombohitra, lalana ala, lalana tsy voadinika sns.)